को–को सवार थिए दुर्घटनामा परेको हेलिकोप्टरमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
को–को सवार थिए दुर्घटनामा परेको हेलिकोप्टरमा ?
काठमाडौं, फागसन १५ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर नजिकैको भिरमा मन्त्री अधिकारीसहित ६ जना सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो ।
याे पनि पढ्नुस गणतन्त्र दिवस र आफ्नै मन्त्रालयको कार्यक्रम छोडेर पर्यटनमन्त्री नीजि कम्पनीसँग घुमघाममा